बुटवल । शेयर बजारको केन्द्र बन्न थालेको प्रदेश नं. ५ को अस्थायी राजधानी बुटवलमा गृहिणीले पनि शेयर बजारमा लगानी गर्न थालेका छन् ।
गृहिणी, शिक्षक र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा आबद्ध महिला लगानीकर्ताले बुटवलस्थित लिञ्च स्टक मार्केट लिमिटेडमार्फत सो लगानी गरेका हुन् ।
उनीहरुले रु. तीन लाखदेखि रु १० लाखसम्म लगानी गरेर लाभांशसमेत लिएको उक्त लिमिटेडका अधिकृत सोनम पाठकले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार लामो समयका लागि कम जोखिम भएका बैंक, इन्सुरेन्स कम्पनीमा महिला लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ ।
‘हामीकहाँ लगानी गर्न आउने विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध महिलाको भीडभाड नै हुन्छ’, उनले भने ।
विभिन्न क्षेत्र कार्यरत करीब ४० प्रतिशत महिला शेयर बजारमा संलग्न रहेको बताइएको छ । ‘कतिपयले बुझेर लगानी गरेका छन् भने कतिपयले नबुझेर पनि लगानी गरिरहेका छन्’, उनले भने ।
उक्त लिमिटेडबाट यससाता झण्डै रु. ६० लाख बराबरको कारोवार भएको छ । गत साता रु. एक करोड बराबरको कारोवार भएको थियो ।
त्यस्तै मिडास स्टक ब्रोकिङ कम्पनी लिमिटेडले यस साता रु. ३० लाखको हाराहारीमा कारोवार गरेको छ । गत साता सो कम्पनीले रु. ३८ लाख बराबरको कारोवार गरेको थियो ।
‘हाम्रो कार्यालयमा चिकित्सक, इञ्जिनीयर, शिक्षकलगायत लगानीकर्ता आइरहेका छन्’, मिडास स्टक ब्रोकिङ कम्पनी लिमिटेडका विज्ञान बज्राचार्यले भने ।
यस्तै दक्षिणकाली इन्भेष्टमेण्ट प्रालिले पनि दैनिक रु. २० लाखको हाराहारीमा कारोवार गर्दै आएको जनाएको छ ।
शेयर बजार यो साता उकालो लागेपछि नयाँ लगानीकर्तामा पनि उत्साह थपिएको छ ।